कोरोनाको उपचार भगवान भरोसा सरकारले उठायो हात (भिडियो रिपोर्ट) | Sagarmatha TV
काठमाडौं विश्वभर कोरोना महामारीको दोश्रो लहर चलिरहँदा नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिसकेको छ । यो अवस्थालाई ढुक्कका साथ नेपालमा कोरोनाको संक्रमण भयावह स्थितीमा आइपुगेको भन्न सकिन्छ ।
विश्वमा कोरोना संक्रमित मूलुकको सूचीमा नेपाल अहिले ३३ औँ स्थानमा छ । तर विडम्बना यसरी कोरोनाको महामारी समुदायस्तरमा फैलिरहदा सरकारले भने हात उठा्रएको छ । अझ सरकार अहिले सार्वजनिक यातायातबाट कोरोना सरेको भन्दै कोरोना सरेकाहरु घरमा बसेर अरुलाई नसार्न नागरीकलाई आग्रह गरेको छ । सकेसम्म कोरोनका बिरामी घरमा रहन र घरमा बस्न नसक्नेलाई आइसोलेसनमा राख्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताएका छन् ।
यसरी फैलिँदो महामारी, बढ्दो मृत्युदर र त्यसको नियन्त्रणमा रतिभर काम गर्न नसकेको सरकारले अहिलेसम्म नागरिकबाट मात्र कोरोना नियन्त्रण हुने अपेक्षा राखेको छ । तर सरकार आफैले भने कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने, नाकामा कडाइ गर्ने, कन्ट्याक्ट टेसिङ गर्ने काम गर्न भने सकेको छैन । जसका कारण कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा नराम्ररी चुकेको सरकारका कारण नेपाल आफुभन्दा ४७ गुणा बढी जनसंख्या भएको चीनलाई समेत उछिनिसकेको छ । यो अवस्थामा सरकारले भने नागरीकले नै स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्दा जोखिम बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमको तर्क छ ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्कमा सहमत छैनन जनस्वास्थ्यविद् । जनस्वास्थ्यविद्का अनुसार सरकारले भने जस्तो दशैमा घर गएकाहरु काठमाडौं फर्किएसंगै काठमडौंमा संक्रमण बढ्ने हल्ला सत्य नभएर बताउँछन् । जनस्वास्थ्यविद् डा. समीर मणि दिक्षित बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौं आउनेहरुमा उपत्यकाकावासीको तुलनामा बढी जोखिम हुने तर्क छ ।
यसरी कोरोना संक्रमणको अत्यन्तै कठिन र संवेदनशील घडीमा सरकारले कोरोना फैलनुमा नागरिक नै दोषि रहको आरोप लगाउदै आफु भने जिम्मेवारीबाट पन्छिदै आएको छ । समग्रमा भन्दा सरकारले कोरोनाको यस घडीमा हात उठाएको छ ।
अझ नेपालीले समुहमा मनाउने चाड दशैँ सकिए पनि नजिकिएको तिहार, छठ, ल्होसार लगायका बेला नागरिकमा कोरोना संक्रमणको जोखिम झन बढ्न सक्छ । तर दायित्वबाट पन्छेको सरकारबाट यो बेला के आशा गर्ने ? यदि नेपालमा अब पनि सजगता नअपनाउने हो भने युरोपियन मुलुक झै नेपालले संक्रमण मात्र होइन मृत्युको भयावह स्थिति बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । अझ संक्रमितको संख्या वृद्धिसँगै उपत्यकामा जटिल रोगका बिरामीले समेत बेड पाउन मुस्किल परेको अवस्थामा जनताले केवल रोगसंग लड्नुको विकल्प हुनेछैन ।